Bookmaker bụ wagering na internet dabere kemgbe 1996 ma kwadola ọtụtụ ihe ịgba bọọlụ kemgbe ahụ. Ndị mmadụ nwere ike ịchọ obere egwuregwu dị iche iche gụnyere baseball, hockey, ụdị ọgụ, ọsọ ịnyịnya, na otutu ndi ozo. Na mgbakwunye, ndị egwuregwu nwere ike igwu egwuregwu poker n'oge ebe poker Bookmaker.com ma ọ bụ gbaa ya na cha cha ha zuru oke. Ihe obula gi choro nke ga-abu, ị nwere ike nwee ike zuru ike na Bookmaker.com ekpuchiwo.
Bookmaker.eu gụnyere ihe gara aga nke mara mma. Ejiri ndi mmadu megharia oge (mana ha bụ ndị na-enyezi ọrụ nlekọta dị elu ugbu a), aha njeri ahụ ezutela ọtụtụ ihe dị mkpa kemgbe ọ malitere n’etiti 1980s dịka ọrụ egwuregwu iwu na-akwadoghị na-emebi emebi nke na-ama jijiji.
Ndị na-agba ọsọ na-egwuri egwu na ntanetị nke dị n'ịntanetị oge ụfọdụ nwere ike iburu n'uche Bookmaker.eu site na aha ya, nke a bụ n'ezie gara aga. Usoro ahụ abanyebere n'ọnọdụ siri ike, n'ikpeazụ, ekpughere saịtị ahụ site na ịnwe isi ụlọ ọrụ na Costa Rica site na iji ikikere egwuregwu egwuregwu nke a bụ n'ezie ihe ziri ezi.
Bookmaker.eu bụ ntụrụndụ na-ewere cha cha, na ndị na-akwụ ụgwọ poker na-atụle na 1980s, ya na ụdị egwuregwu dị n'ịntanetị gosipụtara na 1990s, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si amalite ito eto. Ebe nrụọrụ weebụ gị gụnyere aha dị ogologo ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụdị nyocha dị njọ ma ọ bụ iwe ndị ahịa, yana ọnya ịgba chaa chaa nye ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa niile, gụnyere ndị US na-akwụ ụgwọ.
BookMaker bụ naanị otu akwụkwọ egwuregwu kachasị mfe iji debe ya. A na-ahazi ọrụ ngwa ngwa, na enwere nhọrọ nke otu ị ga-esi tinye ego n'ụlọ akụ.
Ibe ego kaadị cha cha chọrọ akwụkwọ ikike iji mezue ya. Ọ mara ezigbo mma, ọ naghịkwa ewe oge iji dejupụta ya, agbanyeghị na kaadị kwesiri ịmalite ya (A na-enye nduzi).
BookMaker na-anabata karịa 60 ọtụtụ ụdị nke crypto-currency, ma na-enwekarị ihe ndị ọzọ.
Anyị chọpụtara na ịmalite Bitcoin amalitela ọfụma. Weebụsaịtị chọrọ naanị ego ole ịchọrọ idobe na USD, nkọwa ego nke a bụ n'ezie iche iche ị ruru eru maka, emesịa na-enye ụzọ nchekwa obere akpa iji nyefee ego gị. Detuo ebumnuche ahụ, gaa na obere akpa Bitcoin gị iji mado adreesị ahụ, tụọ aro maka ego a bụ n'ezie n'ezie, ya mere, mkpụrụ ego ahụ kwesịrị ịdị njikere mgbe niile iji obere oge ozugbo edepụtara ihe ndị ọzọ. N’ime ihe ọmụma anyị, A kwadebere ya na nkeji iri.
Nnọọ ikpe ziri ezi, nke a bụ n'ụzọ kachasị mfe, kasị dị irè, ọtụtụ sistemụ dị mfe itinye ego n'etiti akwụkwọ egwuregwu. Awaypughari na nmalite nke dicha onye obula n’obi, na ịmalite na BookMaker agaghị adị mfe.
Dra napụ ya & Oge Ego
Dị ka ọtụtụ saịtị, enwere mbipụta nke na-agagharị mma na nkesa nkesa na BookMaker. Ebe kwuru na, teepu nke acha uhie uhie, na mgbakwunye na ha na-enye ọtụtụ nhọrọ iji hụ na ị nwetara ego gị.
BookMaker na-edozi arịrịọ ịkwụ ụgwọ kwa izu. Otu chọrọ mwepụ Bitcoin ma ọ bụ cryptocurrency, ma naanị otu ịchụpụ na-eji usoro ndị ọzọ enwere ike ịchọrọ oge izu ọ bụla.
BookMaker na-ekesa ihe omuma kemgbe ogologo oge. Ha na-arụ ọrụ kemgbe 30 afọ, olu ha kariri buru ibu, gbakwunye ha ga na-akwanyere gị na ego gị ugwu. Site na isoro ntuziaka ha, ha ga ebi ndu na nkwa ha. Ee, ị ga - ahụ ụgwọ n ’ọtụtụ usoro, mana ozi a enyere gị dị mfe site na ịgwa onye nnọchi anya mmadụ tupu ị denye aha.
Nke a bụ abụọ 50% nkwụnye ego egwuregwu ihe nkwanye ego maka egwuregwu ihe dị iche iche na ndị ọzọ maka ndị na-agba ha ụgwọ na cha cha ole na-abụghị. Abụọ ego ndị a ka etinyechara aka na $300, ma mkpa rollover ga-adị iche. Ihe agbam ume Sportsbook choro ndi na-eme ego ndi mmadu zuru onu ahia 10x, ebe nkwalite ego cha cha chọrọ ndị na-akwụ 40x nkwụnye ego na ụma ahụ.
Egwuregwu Sportsbook 15% Nnọọ Egwuregwu Agbakwunyere
Ndị ahịa akwụkwọ egwuregwu ọhụụ nwere ike irite a 15% itinye ego egwuregwu $2,500. Mgbakwunye a bụ susceptible na nkwụnye ego nzọ chọrọ 4x.
Egwuregwu egwu akwụkwọ egwuregwu na-ebugharị
Ndị ahịa na-ebugharị akaụntụ ha nke kachasị eme ugbu a ma 10% ma obu 15% dakọrịrị uru ruru gị $2,500. Onu ogugu na usoro nke onyinye dabere na nha nke nbudata gi. Bookmaker ga-akwụghachi gị ego nke nnyefe ọ bụla $300 dị ka akụkụ nke ego a.
Tuesday n'isi Nnụnụ
& Nkwụnye ego $50 ma ọ bụ ikekwe karịa na Tuesday ma ọ bụ Wenezde (ya na uzo obula ozo ozo ma obu Neteller ma obu Moneybookers) na irite a 20% nkwụnye ego nkwụnye ego bara uru n'ezie $1,000 ụbọchị ụka. Ibudata na ntanetị naanị.
Ndị na-eri akwụkwọ ịgba akwụkwọ ruru eru nwere ike ịme ka ha 8% nloghachi ego kwa ụbọchị, merie ma ọ bụ dobe. Ekwentị ntanetị nke a bụ n'ezie osisi naanị.
Ohere cha cha cha cha
Player egwuregwu oghere ndị ruru eru maka 100% nkwụnye ego nkwụnye ego maka uru ruru $500. Nke a ga-achọrọ ego ego a site na Mkparịta ụka ozugbo. Naanị ndị ọrụ ego iji otu maka egwuregwu iri na abụọ nke saịtị ahụ na-ewepụta mkpochapụ mmezi ahụ, nke na-ewe ntinye ego na mgbakwunye ego nke a n'ezie 25x.
Egwuregwu agbakwunyere cha cha cha cha
I ruru eru inweta nke a 100% nkwụnye ego nkwụnye ego bara uru n'ezie $250 ma ọ bụrụ na i bu n’obi igwu egwu blackjack na / ma ọ bụ video poker, nke a na-eme ka ego. Naanị ndị na-agba ụgwọ na blackjack na egwuregwu egwuregwu poker tụkwasịrị anya na iwepu ihe ndị ọzọ, nke na-ewe ego ntinye ego na mgbakwunye ego nke bu 40x.
Ha na emejuputa ihe ha choro ma oburu na i zoro enyi. Nwere ike igbanye uru bara uru 50% nke nkwụnye ego buru ụzọ $500. Onweghi ihe n’agbazi otutu ihe i gha eme.
Ebe ntanetị ndị ọzọ dị iche iche na-enye nkọwa ndị ọzọ, mana BookMaker na-egosi ha n’uzo di egwu nke n’ile anya n’ile anya. BookMaker bụ naanị saịtị zuru ụwa ọnụ n'ezie ma ọ nweghịkwa egwuregwu na-agaghị n'akwụkwọ.
N'usoro nke iche iche, BookMaker na-abịa na nhọrọ nke sara mbara. Ha nwere mahadum nke na-abụghị radar na egwuregwu bọọlụ ga-elegharị anya, otu bọọlụ bọọlụ n'ụwa niile na-abụ otu kachasị mma n'ahịa, ha ewee nweta ihe ha ga-eme n'ọdịnihu, nteke, na nwa (tinyere ntụrụndụ ndị a ma ama).
BookMaker bụ naanị weebụsaịtị nke a doro anya na ọ zuru ụwa ọnụ, ọ na-abụkarịkwa egwuregwu ha na-agaghị n'akwụkwọ. A ga-emelite okporo ụzọ ozugbo ọ bụla na nkeji oge niile yabụ enweghị nkụja ma ọ bụ ọbụlagodi ịchọ ịdọdata mgbe niile.
Amachaghị Limgba Ewu
Nzọ dị ntakịrị BookMaker bụ $1. Ọtụtụ ndị na-agba chaa chaa anaghị achọ ịma ma ịgba ncha enweghị oke $1,000, $5,000, ma obu $25,000. Ka o sina dị, ndị mmadụ nwere nnukwu akwụkwọ ndekọ ego (ma ọ bụ mmadụ site na ntuli aka maka asọmpi nke onye ọ bụla nwere ike chọọ jikwaa ịga nnukwu mgbe ohere dapụtara. BookMaker na -eme mgbanwe na egwuregwu, ị nwere ike inweta $5,000 ma ọ bụ ikekwe karịa na ọtụtụ ihe omume ndị ama ama ntụrụndụ dị ịrịba ama.
Enwere ike ịchọta oke gafere na ihe omume dị elu — ọbụnadị tenis na-enweghị ntụpọ dabara ndị na-enye ndị ọrụ ohere $1,000. Nhọrọ ahịa dị ka snooker, volley bọọlụ intercontinental, na eSports agbasaghị obere narị ebu.
Ggba Cha Cha Live
Ọtụtụ saịtị na-enye ịkụ nzọ dị ọhụụ nke a bụ n'ezie ezigbo oge mana na-akwụ ụgwọ nickel ma ọ bụ dime mgbe niile maka ohere ịbanye na egwuregwu.. Ọ bụ ezie na BookMaker nwere atụmatụ ihe ọ increasedụ increasedụ na-abawanye mmiri site n'oge ruo n'oge, ọ na-abụkarị karịa 110 na-abụ ọkọlọtọ.
Ha nwere nhọrọ nke a bụ n'ezie ihe ịtụnanya dịnụ, na-eme ihe omume na-enye oge niile. Nhọrọ dị omimi - ma ọ bụ site na onye na-agbasa ozi, ego, ma ọ bụ ọkara elekere - nwere ike ịdị na-egwu egwuregwu. Mgbanwe usoro ịgba ọsọ ndụ na-agbanwe agbanwe nwere n'ezie nhọrọ ịnabata mgbanwe ego, rụọ ọrụ ngwa ngwa wagers wagering nke ahụ bụ(Pịa-pịa, yana kacha nzọ nzọ nke na-enye gị mmachi na ihe ọ bụla Wager ị họọrọ.
BookMaker ọnụnọ ịgba chaa chaa bụ mmezi ya na ụkpụrụ dị mma na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ihe ọmụma ha na-achọ.
Ekwentị ịkụ nzọ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihu akwụkwọ ahụ, okike dị mfe banyere BookMaker mkpokọta weebụ saịtị dị egwu.
Mgbe ị banyere n’ime ekwentị ma ọ bụ mbadamba, Onu ogugu ego nke aka gi nke ego na ego di nke egosiri n’elu. E gosipụtara ndepụta ogologo ogologo ya n'etiti etiti maka ihuenyo ahụ. N'ebe ị na-eche ihe ị ga-achọ ịma, ma ọ bụ ịbụ onye e ji ire ahịa azụmaahịa ị nwere ike ịmasịghị, ntụrụndụ ọ bụla akọwapụtara n'ụzọ nke ngbanwe a dị oke mkpa. Ingchọ egwuregwu ndị ọzọ na - abụghị ihe egwuregwu? Naanị gbadaa na ala.
Ozugbo ahọpụtara ntụrụndụ gị, Egwuregwu ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Họrọ otu egwuregwu na nzọ nke ị na-achọ, pịa wager na nke a bụ n'ezie akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site na isi aka nri ebe metụtara ngwaahịa ngwaahịa, banye n'ime ego iji tinye ma ọ bụ merie, kụrụ “ebe nzọ”, na ihuenyo nkwenye akwụkwọ ndụ na-egosi. Weebụsaịtị BookMaker nke anaghị eme ọfụma. Ọ na-arụ ọrụ, ngwa ngwa, na-atọ ụtọ.